UKumkani UYosiya Wayewuthanda Umthetho KaThixo | Izifundo ZeBhayibhile Zabantwana
UYosiya waba ngukumkani wakwaYuda eneminyaka esibhozo. Ngaloo mihla, abantu babethe phithi yimilingo benqula nezithixo. Xa wayeneminyaka eyi-16, wafunda ukunqula uYehova ngendlela efanelekileyo. Xa efika kweyi-20, watshabalalisa zonke izithixo nezibingelelo ezazikwelo lizwe. Wathi xa ena-26, walungiselela ukuba kulungiswe itempile kaYehova.
Etempileni, umbingeleli omkhulu uHilekiya wafumana umsongo onoMthetho kaYehova, mhlawumbi wawubhalwe nguMoses. Unobhala kakumkani, uShafan, wawuzisa kuYosiya waza wamfundela ngokuvakalayo. Njengoko wawufundwa, uYosiya wabona ukuba abantu kudala bengamthobeli uYehova. UKumkani uYosiya wathi kuHilekiya: ‘UYehova usiqumbele. Hamba uye kuthetha naye. UYehova uza kusixelela ukuba masenze ntoni.’ Esebenzisa umprofetikazi uHulida, uYehova wathi: ‘Abantu bakwaYuda bandishiyile. Ndiza kubohlwaya, kodwa andizukubohlwaya ngoku uYosiya esengukumkani, kuba yena uyandithobela.’
Wathi akuwuva lo myalezo, uKumkani uYosiya waya etempileni, wabiza bonke abantu bakwaYuda. Wabafundela uMthetho kaYehova. UYosiya nabo bonke abantu bathembisa ukuba baza kumthobela uYehova ngeentliziyo zabo zonke.
Kwakusele kudlule iminyaka uhlanga lwamaYuda lungayenzi iPasika. Kodwa xa uYosiya wafunda eMthethweni ukuba iPasika imele yenziwe minyaka le, wathi ebantwini: ‘Siza kwenzela uYehova iPasika.’ Emva koko walungiselela ukwenza imibingelelo emininzi kwaneemvumi ezaziza kucula etempileni. Uhlanga lwenza iPasika, emva koko yanguMthendeleko Wamaqebengwane Angenagwele, nto leyo eyenziwa iintsuku ezisixhenxe. Kwakuqala ukwenziwa iPasika efana naleyo ukususela ngexesha likaSamuweli. UYosiya wayewuthanda nyhani uMthetho kaThixo. Uyakuthanda wena ukufunda ngoYehova?
“Ilizwi lakho lisisibane elunyaweni lwam, nokukhanya endleleni yam.”—INdumiso 119:105
Imibuzo: Wenza ntoni uKumkani uYosiya akuva uMthetho kaThixo? UYehova wayemjonga njani uYosiya?
2 Kumkani 21:26; 22:1–23:30; 2 Kronike 34:1–35:25
Ikhadi LeBhayibhile LikaYosiya
Nakubeni uyise wayengengomzekelo, uYosiya wakhetha ukukhonza uThixo. Yintoni eyamnceda ukuze enze okulungileyo?
IBhayibhile isixelela ukuba kwakungekho lula ngoYosiya ukuba enze izinto ezilungileyo. Funda ngendlela iitshomi zakhe ezamnceda ngayo.
UYosiya Wakhetha Ukwenza Okulungileyo
Wancedwa yintoni uYosiya ukuba enze okulungileyo nangona uyise wakhe wayengumzekelo ombi?